पुनम पाण्डेले सेयर गरिन् नग्न तस्बिरः ट्रोलर्सले भने, ‘पोर्न फिल्ममा किन काम गर्दैनौ ?’ - बडिमालिका खबर
पुनम पाण्डेले सेयर गरिन् नग्न तस्बिरः ट्रोलर्सले भने, ‘पोर्न फिल्ममा किन काम गर्दैनौ ?’
पुनम पाण्डे आफ्नो बोल्ड तस्बिरमा लागि चर्चामा छाइरहन्छिन् । पुनम पाण्डेले इन्स्टाग्राममा विभिन्न न्यूड तस्बिर सेयर गरेकी छिन् । जसमध्ये एउटा तस्बिरमा उनको शरीरमाथि कुनै पुरुषको हात देखिएको छ । सोसल मिडियामा यसको निकै आलोचना भइरहेका छन् ।
अब पुनमले आफ्ना यी तस्बिरका लागि थुप्रै कमेन्ट आइरहेका छन् । स्मरण रहोस्, पुनम पाण्डे सधैं नै आफ्नो बोल्ड र कामुक कन्टेन्टका लागि चर्चित छिन् । इन्स्टाग्राममा उनका २.९ मिलियन फलोअर्स छन् । पुनम सधैं नै आफ्ना यस्तै तस्बिरमार्फत् चर्चामा छाइरहन चाहन्छिन् । यसबाहेक पुनमले अन्य पनि तस्बिर सेयर गरेकी छिन् जसमा उनी पारदर्शी पहिरनमा देखिएकी छिन् ।
उनका यी तस्बिरमा एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘पोर्न फिल्ममा किन काम गर्दैनौ ? ’
तर पुनमलाई मानिसहरुको यस्तो कमेन्टले कुनै फरक पर्दैन । यी तस्बिर अघि पुनमले गणपतीको फोटो पनि सेयर गरेकी थिइन् । यसमा पनि मानिसहरुले रोष व्यक्त गरे । मानिसहरुले भने, ‘यदि यस्तै तस्बिर सेयर गर्ने हो भने गणपतीको फोटो हटाइदेउ’ ।
पुनमले ‘नशा’, ‘आ गया हिरो’ र ‘द जर्नी अफ कर्मा’ जस्ता बलिउड फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन् तर आफ्नो अभिनय कलाले दर्शकलाई प्रभावित गर्न असफल रहिन् । आफ्नो बलिउड करियरममा सफल हुन नसकेका कारण पुनम सोसल मिडियामा लोकप्रियता हाँसिल गर्नका लागि विभिन्न विवादास्पद तस्बिर सेयर गर्ने गर्छिन् ।
स्मरण रहोस्, पुनम निकै लामो समयदेखि इन्टरनेटमार्फत् पैसा कमाउँदै आएकी छिन् र यसमा उनलाई कुनै लज्जा छैन । पुनम पाण्डेले आफ्नो एउटा एप पनि लञ्च गरेकी छिन् जसमा उनको हट फोटो हालिएका हुन्छन् ।
अश्लिल फिल्म बनाएको आरोपमा शिल्पाका पति राज कुन्द्रा पक्राउ
खास के छ विद्या बालनमा ?
‘छोरी जन्मिइन् भने आमा फर्किएको महसुस गर्नेछु’
यसकारण रोइन् कंगना